The World of Moe Thanzin: April 2010
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 9:52 AM7comments:
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 9:55 AM6comments:
ကျွန်မက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကဗျာတွေကိုချစ်တဲ့သူ.. ကျွန်မအဖွားဆိုပြခဲ့တဲ့ ကလေးကဗျာလေးတွေက ကျွန်မနဲ့ဦးဆုံးထိတွေ့ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးတွေပေါ့.. မူကြိုကျောင်းမှာသင်ရတဲ့ ကဗျာလေးတွေကိုလဲ ကျွန်မချစ်ခဲ့တယ်.. အတန်းကျောင်းတက်ရပြန်တော့ မြန်မာကဗျာမျိုးစုံနဲ့ ရင်းနှီးလာရတယ်ပေါ့..
ကဗျာတွေကိုချစ်တဲ့ကျွန်မ ၈တန်းကျောင်းသူအရွယ်လောက်ကစပြီး ကဗျာလေးတွေစမ်းရေးခဲ့တယ်.. ကျောင်းကလုပ်တဲ့ ကဗျာပြိုင်ပွဲတွေဆိုရင်လဲ ၀င်ပြိုင်ဖြစ်တယ်.. သဘာဝအလှကို ဖော်ကျူးတဲ့ကဗျာလေးတွေ.. မြန်မာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ကျူးတဲ့ကဗျာလေးတွေပေါ့.. ပန်းချီကားလေးပေးထားပြီး ကဗျာရေးခိုင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးမျိုးတွေဆိုရင်လဲ ၀င်ပြိုင်တာပဲ.. ဆုရတဲ့အခါလဲရ.. မရတဲ့အခါလဲမရပေါ့..
အချစ်ကဗျာလို့ပြောရင်ရမယ့် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို စရေးဖြစ်တာကတော့ ပထမနှစ်တုန်းကပေါ့.. ကလေးအတွေးနဲ့ရေးထားတဲ့ကဗျာလေးကို တနေ့ကစာရွက်တွေရှင်းရင်းပြန်တွေလိုက်တော့ ရယ်ချင်ပက်ကျိလေးဖြစ်မိရဲ့.. ရေးခဲ့တုန်းကတော့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ပေါ့.. ခုဖတ်ကြည့်တော့သာ ရယ်ချင်စရာ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှတ်အရအနေနဲ့ တင်လိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးရသွားတယ်.. ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး.. ကဗျာလေးခမျာ ခေါင်းစဉ်တောင်မရှိရှာဘူး...
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 4:22 PM3comments:
သားသားကိုယ်ဝန်စရှိကတည်းက ၀လာလိုက်တာ ခုသားသားတောင် ၁၅လကျော်နေပြီ.. နည်းနည်းမှကိုပြန်မပိန်တော့ဘူးလေ.. အစားအသောက်ကလည်းမလျှော့နိုင်တော့ ပိုဆိုးပေါ့.. အရင်က ပေါင်၁၃၀၀န်းကျင်ပဲအမြဲရှိခဲ့ရာ ခုပေါင်၁၅၀ကျော်ဆိုတော့ လူကပုံပျက်နေပါပြီ.. ၅ပေ၅လက်မရှိတဲ့ အရပ်ကလေးသာမကယ်ရင် ရာဝင်အိုးပုံဖြစ်နေလောက်ပြီ.. ခုလည်းသိပ်မထူးပါဘူး.. ရာဝင်အိုးမဟုတ်ပေမယ့် ကတ္တရာပုံးလောက်တော့ ဖြစ်နေပါပြီ... မိန်းမတွေများ ၀ပြီဆို ဗိုက်ကပူခါးကတုတ်ပြီး အင်မတန်ရုပ်ဆိုးတော့တာကိုး.. တနေ့တနေ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲကြည့်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲနေရတော့တာပေါ့..
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က စလုံးအစိုးရကနေ စီစဉ်တဲ့ Lose To Win ဆိုတဲ့ Programme ထဲလဲ ၀င်ပါလိုက်သေးတယ်.. တစ်ပတ်ကို နှစ်ရက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်.. နေထိုင်စားသောက်ပုံနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဟောပြောပွဲတွေသွားတက်နဲ့.. လေ့ကျင့်ခန်းကလဲ ပင်ပန်းသလားမမေးပါနဲ့.. နေပူကျဲကျဲကွင်းပြင်ထဲ ဟိုပြေးဒီလွှား ဟိုခုန်ဒီပေါက်.. ထိုင်ထတွေလုပ်ခိုင်း.. ဒိုက်တွေထိုးခိုင်းနဲ့.. သေချင်စော်ကိုနံရောဆိုပါတော့.. ပိန်လားဆိုတော့ မပိန်ပါဘူး.. အဆီပမာဏလျော့သွားပြီး Fitness Level တော့တက်လာတယ်ပေါ့.. တလောက အကြောတွေခဏခဏတက် ခေါင်းတွေကိုက်နဲ့ဖြစ်နေရာက လက်ပျဉ်တနေရာမှာ ထုံနေတာကိုသတိထားမိပါတယ်.. ဆရာဝန်သွားပြတော့ အကြောကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့.. ဆေးတွေပေးပါတယ်.. ၀ိတ်လျှော့ဖို့လဲ အလေးအနက်ကို တိုက်တွန်းပါတော့တယ်.. ရှိသင့်တာထက် ၁၀ကီလိုလောက်ပိုနေပါတယ်တဲ့.. ဘုရားရေ.. ၁၀ကီလိုဆိုတော့ ၂၂ပေါင်ပေါ့.. ၀ိတ်မလျှော့နိုင်ရင် ခုလိုပဲခဏခဏ မအီမသာဖြစ်နေရဦးမှာပဲလို့လဲ ပိသာလေးနဲ့ ပစ်ထဲ့လိုက်ပါသေးတယ်..
ခုတော့ကျွန်မပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ.. ပိန်မှကိုဖြစ်မယ်လို့.. Target လဲထားထားပါတယ်.. တစ်လကြာရင် ၃ကီလိုလျော့သွားအောင်လုပ်မယ်လို့... ၁၀ကီလိုလျော့ဖို့ အနည်းဆုံး ၃လတော့လိုမှာပေါ့.. နည်းကတော့ အစားလျှော့တဲ့နည်းရယ်.. လေ့ကျင့်ခန်းနည်းနည်းရယ်.. ကိရိယာအကူအညီရယ်ပေါ့... ကျွန်မပိန်ချင်တယ်ဆိုတာ အဓိကဗိုက်ပိန်ချင်တာပါ.. ရှိသမျှအဆီက ဗိုက်မှာစုနေသလားထင်ရတာမို့လား.. အစားအသောက်အနေနဲ့ ဆီနဲ့အဆီများတဲ့အစားအစာတွေကို လုံးဝရှောင်ပါမယ်.. ထမင်းကိုလဲ လက်ရှိစားနေတာရဲ့ ထက်ဝက်ပဲ စားပါမယ်.. ညနေစာကို ထမင်းလုံးဝမပါပဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပြုပ်ပြီးသုပ်ပြီးစားပါမယ်.. ကြွပ်နေအောင်ကြော်ထားတဲ့ ဆီကြော်စာတွေကို လုံးဝစွန့်လွှတ်ရပါတော့မယ်..
လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ များများမလုပ်နိုင်ပါဘူး.. မနက်အစောကြီးတက်ရတဲ့အလုပ်နဲ့ဆိုတော့ ညနေပြန်ရောက်မှပဲ အချိန်နဲနဲရပါတယ်.. သားသားနဲ့ကစားရင်း တိုက်အောက်က အားကစားကွင်းမှာ ခါးလှည့်တာ စက်ဘီးစီးတာ ခြေလွှဲတာလောက်လေးပဲလုပ်နိုင်မှာပေါ့..
အကူအညီအနေနဲ့သုံးမယ့် ကိရိယာအတွက်တော့ မီးမီးချစ် ကိုကျေးဇူ:တင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်.. သူ့ပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီး ကျွန်မ Slendertone လို့ခေါ်တဲ့ခါးပတ် သွားဝယ်ဖြစ်ပါတယ်.. သုံးကြည့်တော့ တော်တော်လေးထိရောက်တာတွေ့ရတယ်လေ.. သူက ကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတဲ့သဘောဆိုတော့ ထိရောက်တာပေါ့.. သူ့ကိုပတ်ထားပြီး အလုပ်ရှိရင်လုပ်နေလို့ရသေးတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်.. အိပ်နေရင်းပတ်ထားရင်လဲ ရတယ်တဲ့.. User Manual ထဲမှာ တလစာအတွက် ပေးထားတဲ့ဇယားလေးလဲပါတယ်.. ပြင်းအားကိုတဖြေးဖြေးတိုးသွားတာမျိုးပေါ့.. သူက Osim လိုမျိုးတုန်နေတာမဟုတ်ဘူး.. ကြွက်သားတွေကို ဆွဲကျုံ့ပေးတာဆိုတော့ လုပ်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဆို နဲနဲတော့နာပါတယ်.. Osim ကိုလဲသုံးဖူးပါတယ်.. သုံးပြီးတိုင်း အသားတွေယားကျန်ခဲ့တာကို မခံနိုင်လို့ဆက်မသုံးဖြစ်တော့ဘူး.. Slendertone နဲ့တော့အဆင်ပြေနေပါတယ်.. စလုံးငွေ ၃၈၈ ပေးရပါတယ်..
ကဲ မောင်နှမတွေထဲကရော ပိန်ချင်တဲ့သူရှိရင် ပူးပေါင်းကြရအောင်လား.. လှချင်တာထက် ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုလိုအပ်နေတာမို့ ကျွန်မအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါတော့မယ်.. ဒီလောက်ကြိုးစားလို့မှ မပိန်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒွတ်ခပါပဲနော်......
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 12:14 PM7comments:
မနက်ဖြန် ဧပြီ ၆ရက်နေ့မှာ ကျွန်မတို့မင်္ဂလာသက်တမ်း ၂နှစ်တိတိပြည့်ပါမယ်.. မဂ်လာနှစ်ပါတ်လည်အလှူအနေနဲ့ လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ ဓါတ်တော်တိုက်ကကျင်းပမယ့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်မှာ စတုဒီသာအလှူလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်.. အားလုံးပဲ ကြွရောက်ချီးမြှင့်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်.. သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ.. ကဗျာပြိုင်ပွဲ.. မြန်မာသင်္ကြန်အဆိုအကတွေနဲ့ စည်စည်ကားကားလေးဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားတဲ့ပွဲလေးမို့ အတူတူပျော်ရွှင်ဆင်နွှဲရအောင် လာခဲ့ကြပါနော်..
Yeo 's Building
No. 2, Telok Blangah Street 31, Singapore 106942
Bus no. ( 10, 30, 57, 61, 93, 97, 100, 143, 166, 176, 188, 963 )
Bus stop name : B11 Opp Yeo's Bldg ,Telok Blangah Rd (from East Area)
B12 Telok Blangah Rd (from West Area)
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 10:04 AM3comments: